Eeg Weedhaha 'Instagram' ee Ingiriisiga ah Waxaad Isticmaali Kartaa ▷ ➡️ Kuwa Raacaya ▷ ➡️
Eeg jumladaha loogu talagalay Instagram ee Ingiriisiga aad isticmaali karto
January 16, 2019 0 comments 1872
Oraahda Ingiriisiga ayaa had iyo jeer noqon doonta ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay koonto ka bilaw InstagramDhamaanteen waan ognahay in Ingriisigu yahay luqad guud ahaaneed isla markaana halkaas ay dad badani dareemi karaan in lagu garto.
Sababtaas awgeed ayay tahay inaan maanta ku siino qaar ka mid ah kuwa ugu wanaagsan oraahda loogu talagalay Instagram af Ingiriis Waad ugu adeegsan kartaa koontadaada oo aad ka dhigtaa mid aad u caan ah, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad doorato jumladaha ugu fiican ee qoraalkasta.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso Suuqgeynta saamaynta ee Instagram.
Maxaad ugu adeegsanaysaa jumlado Ingiriisiga ah?
Oraahda Ingiriisiga had iyo jeer waxay noqon karaan kuwa aad iyo aad u caan ah oo caan ahIntaa waxaa sii dheer, waxaad ka dhex dhigi kartaa weedh Ingiriis ah buug, jumlado qosol leh ama xitaa jumlado laga soo qaaday heesaha Ingiriisiga ah oo u adeegi doona marin ahaan sawirradiina.
Tilmaanta ugu weyn ayaa ah in ay weyn tahay in aad dhigto tarjumaadda waxa aad qoreyso, si kuwa ku raacaya ee aan aqoon luqadda ay u fahmaan macnaheeda oo ay u adeegsadaan in ay si kalsooni leh ula wadaagaan.
Erayada loogu talagalay Instagram ee Ingiriisiga si kor loogu qaado naftaada
Noqo Dagaalyahan ha noqon Shaqaale.
Noqo dagaalyahan, ee ha murugoon.
Markaad jilicsan tahay, cun bunni bunni ah.
Markaad hoos udhacayso, samee bunni bunni ah.
Waxaan helnay dareenkaas jimcaha.
Dareenkaas habeenkii jimcaha.
Waan niyad jabay laakiin lama yaabin.
Kama sameyn kartid shaxanka astaamaha dadka aasaasiga ah.
Kama sameyn kartid waxyaabaha aasaasiga ah dadka aasaasiga ah.
Maaha inta aan haysano, laakiin inta aan ku raaxeysto, ayaa farxad ka dhigaysa.
Maahan wax aan heysano oo dhan, laakiin wax walba oo aan ku raaxeysto, ayaa farxad geliya.
Noloshu dhibaato maaha in la xalliyo, laakiin waa xaqiiq lagu khibradeeyo.
Noloshu dhibaato maahan in la xalliyo laakiin waa run in la soo arko.
Erayada Ingiriisiga ee wehelnimada
Ma jiro wax ka fiican saaxiib wanaagsan, marka laga reebo saaxiib wanaagsan oo shukulaato ah.
Ma jiro wax ka fiican saaxiib wanaagsan, marka laga reebo saaxiib wanaagsan oo ka fiican shukulaatada.
Asxaabta ayaa kugu iibsanaya cunto. Asxaabta ugu fiican ayaa cuna cuntadaada.
Asxaabtu wey iibsadaan waad cunteen. Asxaabta ugu fiican ayaa cuna.
Asxaabtu yaanay kuu ogolaan inaad waxyaabaha nacasnimada ah… kaligaa!
Asxaabta Ugu Fiican Way yaqaanaan sida aad u waalan tahay, haddana way ku fiican yihiin inay kula joogaan dadweynaha.
Asxaabta ugu fiican way ogyihiin sida aad u waalantahay oo aqbashaa inaad kula joogto meel fagaara ah.
Waqtiyada adagi marwalba waxay daaha ka qaadi doonaan saaxiibo run ah.
Waqtiyada adag waxay muujiyaan saaxiibo run ah.
Asxaabtu waa cunsurrada ugu muhiimsan cuntada nolosha.
Saaxiibbadu waa cunsurrada ugu muhiimsan ee wax ku karsashada cuntada ee nolosha.
Daawada ugu weyni waa saaxiib run ah.
Daawada ugu fiican waa saaxiib fiican.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso sida aad naftaada ugu kobcin karto shabakadaha bulshada.
Erayada ku saabsan jacaylka ee Ingiriisiga
Waxaad iga farxisaa hab aan cid kale awoodi karin.
Waxaad iga farxisaa hab aan cid kale awood u lahayn.
Waxaan kaa rabaa maanta, berri, isbuuca soo socda, sanadka soo socda iyo inta ka hartay noloshayda.
Waan ku jeclahay maanta, berri, usbuuca soo socda, sanadka soo socda iyo inta ka dhiman noloshayda.
Waan ku jeclahay wax ka badan shukulaatada.
Wali waan xasuustaa dhunkadeena koowaad.
Wali waan xasuustaa dhunkadeena koowaad
Adduunku waa buug. Ma jeclaan lahayd inaad wada akhrisaan?
Adduunku waa buug. Ma rabtaa inaan wada akhrino?
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso Falanqaynta Instagram.
Weedho heeso Ingiriis ah
Adigu waxaad tahay dhammaad iyo bilow. Xitaa markaan guuldareysto waan guuleysanayaa. Sababta aniga oo dhan waan ku siinayaa, adiguna waad isiisaa dhammaantiin, oh oh ... / John Legend -Waxaan ahay
(Anigu waxaan ahay dhammaadkaagii, oo waxaad tahay bilowgayga, Xitaa markaan lumiyo waan badiyaa.
Qorraxdu way dhacdaa, xiddiguhuna way soo baxaan, wax kasta oo la tiriyo waa halkan iyo hadda. Adduunkeygu sidiisuu ahaan maayo, waan ku faraxsanahay inaad timid / Robin Schulz - Qorraxdu Waa Dhacdaa
(Waxay ku dhuuntaa qorraxda, xiddiguhuna way soo baxaan, waxaas oo dhanna waa halkan iyo imminka.
Sababta Eebbe igu siiyay kor iyo hoosba. Ilaah wuxuu ku siiyay maalmihii shakiga / Blake Shelton - Ilaah ayaa adiga ku siiyay
(Maxaa yeelay, Ilaah wuxuu kugu beddelay noloshay wanaagga iyo xumaanta), Ilaah wuxuu ii keenay maalmihii shakiga)
Waxaad tahay waxa ugu fiican ee waligey aniga iska leh Taylor Swift - Aniga
(Waxaad tahay qofkii ugu fiicnaa noloshayda)
Anigu waxaan ahay horyaal waxaadna maqli doontaa aniga oo ciyey / Katy Perry - guux
(Waxaan ahay horyaal waxaadna maqli doontaa inaad cabaadeyso)
Qalbigeygu waa isbuunyo, waa kuu garaacaysaa, ee dhagayso dhow / Halyeeyga Fasalka Jimicsiga - Qalbi istareed
(Qalbigeygu waa shay garaacis ah
Noloshu waa xeeb, waxaan ku ciyaarayaa ciidda / Lil Wayne - Xuquuqda kore
(Noloshu waa xeeb, kaliya waxaan ku ciyaaraa ciidda)
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso Instagram TV.
1 Maxaad ugu adeegsanaysaa jumlado Ingiriisiga ah?
1.1 Erayada loogu talagalay Instagram ee Ingiriisiga si kor loogu qaado naftaada
1.2 Erayada Ingiriisiga ee wehelnimada
1.3 Erayada ku saabsan jacaylka ee Ingiriisiga
1.4 Weedho heeso Ingiriis ah
Fiiri weedha ugu fiican ee nolosha Instagram
Kuwani waa tilmaamaha tooska ah ee tooska ah ee loogu talagalay Instagram